Olivier Giroud Oo Wacdaro Dhigay Kulan Ay Chelsea Dhulka La Sintay POAK Oo Ka Tirsanaa EL
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa lug lasii gashay wareega 32-da ee tartanka Europa League, kadib markii ay labo cad ka dhigeen dhigooda POAK. Dheesha oo ka qabsoontay garoonka Stamford Bridge ayaa daqiiqadihii loo qorsheeyay waxay kusoo…
Maurizio Sarri Oo Shaaciyay Cida Masuulka Ka Ah Guuldaradoodii Ugu Horeysay Ee Premier League
Abdirahman	 Nov 25, 2018
Chelsea ayaa daafacan waysay iskoorkeedii ahaa in aanan wali laga badin dhamaan kulamadii ay xili ciyaareedkan ka dheeshay tartanka Premier League. Rikoorkaan waxaa haatan kali ku ah Manchester City, kuwaasi oo kaga jira shaxda kala…
N’Golo Kante Oo Fahfaahiyay Dareenkiisa Ku Aadan Heshiis Kordhin Uu U Sameeyay Kooxdiisa Chelsea
Abdirahman	 Nov 23, 2018
N’Golo Kante ayaa ku kordhiyay joogitaankiisa Chelsea muddo ku siman Shan sano, oo uu daafici doono maaliyadda kooxda kubadda cagta Blues. Xidigaan udhashay dalka Faransiiska ayaa naadiga Galbeedka London ka dhisan wuxuu uga soo biiray…
Didier Drogba Oo Shuruud Adag Ku Xiray In Jose Mourinho Uu Ku Guuleysto EPL Wax Ka Badan 2 Jeer
Abdirahman	 Nov 22, 2018
Didier Drogba, ayaa ku dhawaaqay maanta oo Khamiis ah inuu isaga fadhiistay ciyaaraha caalamiga ah xili uu yahay 40-sano jir. Xidigii hore ee Chelsea, kaasi oo kasoo hoos-shaqeeyay Jose Mourinho ayaa wuxuu shaaciyay in macalinkiisii hore…
Giroud Oo Fariin Digniin Ah U Diray Xidigaha Chelsea Xili Uu Wacad Ku Maray Inuu Dagaalamayo Halkaan…
Abdirahman	 Nov 19, 2018
Gooldhaliyaha Chelsea iyo xulka qaranka Faransiiska ee Olivier Giroud ayaa wacad ku maray inuu udagaalami doono sidii uu ku heli lahaa booskiisa Blues. Olivier Giroud oo Blues kaga soo biiray horaantii fasal ciyaareedka dhigeeda Arsenal…
Olivier Giroud Oo Ka Hadlay Rajadda Uu Ka Qabo Inay Chelsea Xagaagan Ku Guuleysato EPL
Horyaalka Premier League waa midka ugu xiisaha badan Premier League, xili fasal ciyaareedkan koox kasta ay xusul duub ugu jirto sidii ay ugu guuleysan lahayd. Chelsea waa kamid ah naadiyada sida xoogan loogu saadaalinayo inay hanan karto,…
Morata Oo Dhaleecayn Culus U Jeediyay Jamaahiirta Chelsea Iyo Xulka Spain Xili Uu Sharaxay Sababta
Alvaro Morata ayaa shaaca ka qaaday in dhibaatooyinkiisii ugu dambeeyay ee ku aadanaa sidii uu bandhig wacan uga sameyn lahaa ay salka ku haysay inaanu maskax ahaan iyo jir ahaan. Gooldhaliyaha reer Spain ayaa tibaaxay in taageerayaasha ay…
Gooldhaliye Eden Hazard Oo Daboolka Ka Qaaday Xidigii Ku Qanciyay Inuu Kusoo Biiro Chelsea
Abdirahman	 Nov 13, 2018
Eden Hazard ayaa wuxuu siiyay Joe Cole sumcadda inuu ku qanciyay kusoo biiritaanka Chelsea, kana soo dhaqaaqo Lille todoba sano kahor. Cole, kaasi oo ku dhawaaqay inuu isaga fadhiistay ciyaaraha Talaadda maanta ah, ayaa sanad ciyaareedkii…